Plantsdị dị iche iche nke ahịhịa na-arụ ọrụ n'ụba na ụdị zuru ezu. Dabere na echiche nke “akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, gburugburu ebe obibi, mmekọrịta dị mfe, mara mma ma mara mma”, anyị na-agba mbọ ịmepụta ahịa pụrụ iche maka osisi simulated, iji mee ka ndị mmadụ na-eme ka ndụ ha mma, gbanwee mma…
E nwere ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ n'ahịa.ma n'ihi ya, achọrọ njiri dị mkpa chọrọ iji pụọ iche n'ọtụtụ ndị nrụpụta. Ugbu a, ka anyị webata maka ike njikwa nke ụlọ ọrụ anyị: Nke mbụ: Ihe ndị a họọrọ: urughuru plastik (1) Ihe niile dị n ’PE n…
Anyị niile maara na ezigbo osisi chọrọ mmezi, na osisi keakamere ka ifuru dịkwa mkpa mmeziSpecific otu esi elekọta. Ka anyi ewebata ihe banyere mmezi nke ihe ndia. A na-eji ihe ndị mejupụtara ihe ọkụkụ eme ihe na kemịkal mgbe ejiri fused, nwee ụfọdụ ihe yiri ...